Erdogan iyo Trump oo khatka telefoonka oga wada hadlay dilkii Khashoggi. – The Voice of Northeastern Kenya
Erdogan iyo Trump oo khatka telefoonka oga wada hadlay dilkii Khashoggi.
Anwar Mohamed October 22, 2018
Madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa khatka telefoonka oga wada hadlay dilkii loo geystay saxafiga Jamal Khashoggi
Sida ku xusan bayaan ka soo baxday xafiiska isgaarsiinta madaxweynaha Turkiga ayaa lagu sheegay in Erdogan iyo Trump ay isku afgarteen in loobahanyahay kiiska Khashoggi in la cadeeyo dhinacyada oo dhan.
Jamal Khashoggi ayaa dad ugu wardambeysay 2-dii bishan October xiligaasi oo uu galay qunsuliyada sacuudiga ku leedahay magaalada Istanbul ee wadanka turkiga.
Kadib maalmo la diiday in la ogaado meesha uu ku dambeeyay ayay sabtidii dowlada sacuudiga sheegtay in Khashoggi uu u dhintay dagaal qunsuliyada gudaheeda ka dhacay.
15 muwadiniin u dhashay sacuudiga oo ay ku jiraan saraakiil kla dauwan oo watay laba diyaaradood ayaa soo booqday qunsuliyada sacuudiga ku leeyahay Istanbul iyadoo Khashoggi wali ku jiray gudaha qunsuliyada sida laga soo xigtay booliska Turkiga.
Dhamaan dadkaasi la sheegay inay soo booqdeen qunsuliyada sacuudiga ayaa markii dambe dib ugu laabtay wadanka sacuudiga.
Ciidamada isku dhaf oo ah kuwa turkiga iyo sacuudiga ayaa khamistii soogabagabeeyay baaritaankii ay ku hayeen dilkii wariye Khashoggi.
Shaley ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sheegay inuu maalinka talaadada soo saaraayo warbixin dhamaystiran oo ku aadan dilka lagula kacay Jamal Khashoggi.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labadan hogaamiya ay khatka telefoonka uga wada hadleen badrigii Mareykanka ay dowlada Turkiga xirtay oo la siidaayay ,in la iska kaashada la dagaalanka argagixiada iyo arrimaha Suuriya.
← Tight security as KCSE exams begin today
Laba ka mid ah mudanayaasha maamul goboleedka Marsabit oo la xiray →